ब्लड ग्रुपअनुसार थाहापाउनुहोस् तपाईको स्वभाव कस्तो ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/ब्लड ग्रुपअनुसार थाहापाउनुहोस् तपाईको स्वभाव कस्तो ?
जानौं कुन ब्लड ग्रुप भएका मानिस कस्ता ?
बी ग्रुप : टाइप बी ब्लड ग्रुप भएका मानिस जो सँग पनि चाँडै घुलमिल गर्न सक्ने क्षमताका हुन्छन् । अर्थात् यो ब्लड ग्रुप भएका मानिस निकै मिलनसार हुन्छन् । बी ब्लड ग्रुप भएका मानिस निकै मिहेनती हुन्छन् । यि व्यक्तिहरू जीवनमा सबै काम आफ्नै मिहिनेतले प्राप्त गर्न चाहन्छन् । बी ब्लड ग्रुप भएका व्यक्ति सत्य बोल्नमा विश्वास राख्छन् । साथै यिनीहरू निकै जिद्दी पनि हुन्छन्, जसले गर्दा सजिलै कसैको पनि कुरा मान्दैनन् ।
ओ नेगेटिभ ग्रुप :ओ नेगेटिभ भएका मानिसहरू संक्र्रिण सोँच राख्ने मानिन्छ । यस्ता व्यक्तिहरू अरुको लागि भन्दा आफ्नो लागि बढी सोच्ने गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो भन्दा अरुको त्यति ध्यान नहुने गरेको बताइन्छ । उनीहरू नयाँ विचारलाई सहज स्वीकार्न नसक्ने प्रकृतिका हुन्छन् । ओ नेगेटिभ रक्त समूहका मानिसलाई जरुरी परेको खण्डमा ओ नेगेटिभ रगत नै लिन सक्छन् ।
याै,न स,म्पर्क ग,र्दागर्दै चारजनाकाे लिं,ग भा,चिएपछि….
कपडा न’लगाइ विवाह सम्पन्न तर त्यो कुरा कसैले पत्तो नै पाएनन्